Sedaxda Musharax ee u taagan Xilka Gudoomiyaha Baarlamanka Puntland - Awdinle Online
Sedaxda Musharax ee u taagan Xilka Gudoomiyaha Baarlamanka Puntland
November 14, 2019 (Awdinle Online) – Magaalada Garoowe ee xarunta maamlka Puntland ka bilaabatay doorashada gudoomiyaha golaha wakiiladda waxaana la dhageystay khudbadaha Musharaxiinta u taagan Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland.
Kulanka Golaha waxaa goobjoog ah 63-xildhibaan 3-mudane ayaa la sheegey in ay ka maqan yihiin fadhiga sida uu shir gudoonka goluhu sheegey.
Murashaxiinta u tartamaya xilka gudoomiyaha baalamaanka Waxa ay kala yihiin 1: Cabdi Jamaal Cismaan Maxamed, 2: Cali Axmed Saalax 3: Cabdirashiid Yuusuf Jibriil.
Ku-xigeenka Gudoomiyaha Golaha Wakiiladda Puntland ayaa golaha ka hor sheegay in uusan jirin wax dhaq-dhaqaaq ah oo ay samayn karaan mudanayaashu inta ay socoto doorashada Gudoomiyaha lana xirayo albaabada hoolka in lagu guda jiro doorashada.
Previous articleMaxaa ka jira abaabulka banaanbaxyo ka dhan ah Dowladda Somalia oo ka socda Muqdisho
Next articleGudoomiyaha Baarlamanka oo Ku dhawaaqay in aysan jiri doonin mudo kororsi